Gonesa Yako Webinar Kushandisa: Webinar ROI Calculator | Martech Zone
Waizviziva izvozvo, paavhareji, B2B vatengesi vanoshandisa gumi nematatu nzira dzakasiyana dzekutengesa yemasangano avo? Ini handizive nezvako, asi izvo zvinondipa musoro kungofunga nezvazvo. Nekudaro, pandinonyatsofunga nezvazvo, isu tinobatsira vatengi vedu kuendesa nezve iwo akawanda matekinoroji gore rega uye iyo nhamba iri kungokwira chete sezvo masvikiro achiwedzera kuzara. Sevashambadziri, tinofanirwa kukoshesa nguva uye kupi kwatichazoshandisa nguva yedu kana kuti hatizombowana chero chinhu chingaitwe!
Rinenge gore rapfuura, isu takatanga kushanda ne ReadyTalk, a webinar software chikuva, uye isu takatumira yedu yega webinar nhepfenyuro kuti tione kuti chii chakakonzera. Isu takagadzira pamusoro pe600 inotungamira pamusoro penzira ye3 webinars kune vatinoshanda navo, uye vangangoita 25 - 30% yavo yakashanduka ikava nzira dzakakodzera. Pasina mubvunzo kutaura, mawebhu webhu yakava imwe yemazano edu epamusoro ekutengesa matekiniki muna 2014.
Kune kumwe kuverenga kwekuwedzera pawebhuinar kusimudzira, verenga chinyorwa changu pane webinar kusimudzira matipi, 10 Matipi Ekusimudzira Yako Inotevera Webinar.
Kana isu tichiisa pamberi pekushambadzira mishandirapamwe nevatengi vedu, isu tinogara tichitarisa iyo ROI yekuyedza kwedu uye ndeapi achatungamira kune kumwe kutendeuka. Pataive tichinyatso kuona shanduko nemawebinar, isu taidawo kuverenga iyo ROI. Ndipo patakasarudza kubatana ne ReadyTalk uye kugadzira Calculator inopa izvo chete: kuverenga pawebhu webinar ROI.
Kunyangwe iwe wakamboshandisa webinars munguva yakapfuura kana iwe uchangotanga, unogona kushandisa ichi Calculator ku:
Ziva kuti yako webinar chirongwa chii / ichakutorera iwe,
Tora kurudziro yeiri nani ROI,
Enzanisa mutengo muzvikamu, uye
Sarudza mashandisiro aungaite mawebhunare esangano rako.
Tsvaga yako webinar ROI izvozvi:
Shandisa ReadyTalk's ROI Calculator
kuburitsa: ReadyTalk aive mutengi wedu uye anotsigira we Martech Zone.
Tags: Kushambadzira WebinarReadyTalk karukuretaroi kuverengaroi karukuretaweb musanganomusangano wewebhumusangano wewebhuwebinar roi